နယူးအိတ်ကပ်, Izmit ယာဉ်အသွားအလာစိတ်သက်သာရာရလိမ့်မည် - rayhab
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး41 Kocaeliနယူးအိတ်ကပ်, Izmit ယာဉ်အသွားအလာစိတ်သက်သာရာရလိမ့်မည်
အသစ်ကမိုဘိုင်းအတွက်အသွားအလာ izmit သက်သာရာပါလိမ့်မယ်
Izmit Dervişoğlu Salim လမ်း, D-100 အဝေးပြေးလမ်းမကြီးတစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာလမ်းကြောင်းအဖြစ်နိုင်ငံသားများမှန်ဆောင်မှုကိုပေး။ နိုင်ငံသားများ Izmit သူတို့ရဲ့ Karamursel ရေအိုင်နှင့်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီး, လမ်းတစ်လျှောက်တွင် Salim DervişoğluBaşiskeleဘူတာရုံအားဖြင့် Mimar Sinan နှင့်တံတားများ, Izmit စျေးကွက်သုံးပြီးဗဟို Adnan Menderes, Turgut Ozal တည်ရှိသည်။ ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်ယာဉ်ကြောစီးဆင်းမှု၏သိပ်သည်းဆဖြစ်ပေါ်စေKöseköyလမ်းပေါ်မှာလျှော့ချ၏ညှနျကွားအတွက်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဂိတ်များအပေါ်ခရီးသည်ယူပါ။ Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သိပ္ပံအလုပ်လုပ်ဦးစီးဌာနကို download လွယ်ကူချောမွေ့ပြီးအဆင်ပြေလမ်း, ခရီးသည်များနှင့်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယူအဖြစ်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်အသွားအလာများစီးဆင်းမှုကိုနှောင့်အယှက်နိုင်ရန်အတွက်လမ်းပေါ်မှာသစ်ကိုအိတ်ကပ်တည်ဆောက်ရန်အဖြစ်။ အဆိုပါလေ့လာမှုများအသစ်ဆဲလ်များတွင်ဆောက်လုပ်ထားပါလိမ့်မည်သည့်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရွေး-Up and download အတူထွက်သယ်ဆောင်။
အဆိုပါDervişoğlu Salim လမ်း Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ချဲ့ထွင်ရန်အဆင့်ဆင့်အတွက်, Adnan Menderes, အ Mimar Sinan လမ်းပေါ် Turgut Ozal နှင့်တံတားအဆောက်အဦးများကတွေ့ရှိခဲ့အသစ်တစ်ခုဆဲလ်များအတွက် pauses ။ Salim Adnan Menderes တံတားDervişoğlu၏မူဘောင်အတွင်းအလုပ်လုပ်နေလာမယ့်စတင်ခဲ့သည်ပထမဦးဆုံးမိုဘိုင်းစစ်ဆင်ရေး၏ခွရန်အလမ်းအပေါ်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရပ်တန့်ဘို့တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ တူးဖော်အောက်တွင်လေ့လာမှုများ, ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်ပထမထပ်ငါ၏အမှု့သတ်ထားခြင်းကိုယူစဉ်များနှင့်ကတ္တရာစီးရီးလမ်းခင်း။ ဤတွင်အိတ်ကပ်အားလုံးနှင့်ပါဝင်မှုနှင့်အတူအစင်းအတွက် 190 မီတာရှည်လျားသောလမ်းဖြစ်လိမ့်မည်။
Turgut Ozal အတွက် Mimar Sinan မှတံတား DE တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် BE
ခရီးသည်စာအုပ်ချုပ်သမား Sabanci ယဉ်ကျေးမှုစင်တာနှင့်အစ္စတန်ဘူလ် Mimar Sinan ပြပွဲအနားမှာဆင်းသက်ဘယ်မှာသုံးမှတ်တိုင်များအတွက်အထူးသဖြင့်ပြင်းထန်သောဖြစ်လတံ့သောနှစျခုနဲ့အခြားမိုဘိုင်း, တံတားအနားမှာဖြင့်ခေတ္တများအတွက် Turgut Ozal များ၏ရှေ့မှောက်၌တညျဆောကျပါလိမ့်မည်။ နှစ်ဦးစလုံးသည်မိုဘိုင်းတစ်ခုတည်းလမ်းသွားနှင့် 90 မီတာရှည်လျားရပါလိမ့်မယ်။ ပြင်းထန်စွာသိပ္ပံရေးရာအဖွဲ့များအလုပ်လုပ်ဆက်လက်သူအများတို့သည်မိုဘိုင်းအဆောက်အဦပြီး, တိုတောင်းတဲ့အချိန်အတွင်းမှာနိုင်ငံသားများ၏ဝန်ဆောင်မှုပူဇော်ပါလိမ့်မယ်။
Tokat ယာဉ်အသွားအလာစိတ်သက်သာရာစီမံကိန်းများဖြစ်လိမ့်မည် 13 / 12 / 2012 အဆုံးသတ်အကြောင်းကိုကြောင်းအကြီးစားလေ့လာမှုများ၏အသွားအလာပြဿနာများ၏ဖြေရှင်းချက်ကိုရည်မှတ် Tokat မြို့တော်ဝန် Adnan Cicek, သူကပြောသည်။ Tokat မြို့တော်ဝန် Adnan Cicek, Gaziosmapaşတံတားနှင့်လမ်းဆုံအလုပ်သင့်ပါတယ်တေို့ Tokat လက်ထောက်မြို့တော်ဝန် Mustafa, သိပ္ပံအလုပ်လုပ်ဒါရိုက်တာ GurcanTurkoglu Altunkar ကူးကြည့်ရှုကြ၏။ မြို့ထဲတွင်အသွားအလာပြဿနာများ၏ဖြေရှင်းချက်နှင့် ပတ်သက်. နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ပန်းပွင့်, အကြီးစားလေ့လာမှုများဆက်လက်ဖြစ်ကြောင်းမှတ်သားခဲ့ကြသည်။ နိုငျငံတျောသမ်မပန်းပွင့်၏ Tokat Ring ကိုလမ်းဖွင့်ပွဲများအတွက်သမိုင်းဝင်နေ့ရက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဖျောပွပါကယနေ့ 1980 ၏လူရဲ့မျှော်လင့်ချက်မှဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောသည်။ Eyup မြို့တော်စည်ပင်ကအဖြစ်နှစ်ခုဆုံခြင်းနှင့်ပိတ်ပွဲစစ်ဆင်ရေး te ပတ်သက်. တူးမြောင်းကျော်တံတား ...
အဆိုပါတံတားဟာအသွားအလာ Batman ပြီးဆုံးလမ်းဆုံသက်သာရာပါလိမ့်မယ် 12 / 06 / 2014 အဆိုပါယာဉ်ကြော Interchange သက်သာရာလိမ့်မယ် Batman ပြီးဆုံး: အအသွားအလာ 80 ရာခိုင်နှုန်း, ဉမင်လိုဏ်ခေါင်းများနှင့်လမ်းဆုံသတ်မှတ်ထားသော2လအတွင်းကယ်နှုတ်ရလိမ့်မည်သက်သာရာတံ့သောအဟောင်းကိုတံတားအတွက် Batman ပြည်နယ်ဆေးရုံ။ , ဉမင်လိုဏ်ခေါင်းများနှင့်လမ်းဆုံ2လအဆုံးမှာပြီးစီးရန်စီစဉ်ထားသောသူသည်ယခင်ပြည်နယ်ဆေးရုံများတွင်ဆောက်လုပ်ဆဲတံတား။ အလုပ်စောငျ့ရှောကျဖို့, Interchange စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ Ugur Bekiroglu ၏ဆောက်လုပ်ရေးစတငျခဲ့နှင့်အလုပ်အရှိန်အဟုန်မြှင့်ရန်တူရကီကနေလာသောကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ရှင်။ ယင်းအလုပ်၏အောက်ဆုံးဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းကစတင်နှင့် superstructure အဆုံးစင်မြင့်ဆီသို့လာသောဝန်ဆောင်မှု၏နိဒါန်းနှင့်အတူတံတားလမ်းဆုံကိုညွှန်း Bekiroglu, မြို့ဤအရပ်ဌာနကိုဇိမ်ခံလိမ့်မည်ဟုဆိုသည်။ တူရကီအတွက်ထိုကဲ့သို့သောကြီးမားစီမံကိန်း Bekiroglu, များစွာသောအချက် ...
တူရကီရဲ့ကေဘယ်လ်ကားစနစ်အသွားအလာလျော့ပါးလိမ့်မယ် 16 / 05 / 2012 တူရကီမြို့တော်မြူနီစီပယ်, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်မြို့ပြအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ရေတိုနှင့်အလယ်အလတ်အကွာအဝေးအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး cable ကိုကားတစ်စီးစနစ်အဖို့လိုင်းအချို့နှင့်အတူကူညီပေးဖို့မရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်အတွင်းယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုသက်သာ။ ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာများ၏မြို့တော်မြူနီစီပယ်ညီလာခံသာမန်အစည်းအဝေးအတ္တအထွေထွေညွှန်ကြားမှုဤအမြှုပ်မိုင်းအတွက်လုပ်ကိုင်ခွင့်အာဏာခဲ့ရာ, တည်ထောင်ရန်, cable ကိုကားတစ်စီးသည့်စနစ်ကိုထည့်သွင်းရန်, အများစုမဲကလက်ခံခဲ့ကြသည်။ Melih တှငျကငျြးပခဲ့တူရကီမြို့တော်မြူနီစီပယ်ညီလာခံအစည်းအဝေးကေဘယ်လ်ကားလိုင်း, Hacı Bayram Veli ဗလီစီမံကိန်းလမ်းပေါ်မှာ၏မြို့တော်မြူနီစီပယ်ခေါင်းနှစ်လုံးနှင့် 12 မီတာအပေါ်လမ်းမများပေါ်တွင်အများပြည်သူယာဉ်ရပ်နားအပေါ်သမ္မတ post ကိုရရှိနိုင်ပါကိုလက်ခံ၏မြို့တော်ဝန် ...
တတိယတံတားအဆိုပါထရပ်ကားယာဉ်အသွားအလာသက်သာရာပါလိမ့်မယ် 11 / 06 / 2013 စီမံကိန်းရဲ့အကောင်းဆုံးအာရုံစိုက်အရေးပါတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်လိမ့်မည်ဆိုပါကတတိယတံတား, တူရကီသစ်ကိုနူးညံ့၏တတိယလေယာဉ်ခရီးစဉ်များအတွက်အရေးပါသောစီမံကိန်းကိုကြောင်းဖော်ပြထားသည်ဥက္ကဋ္ဌ Hamdi ကဲ့သို့ပင်နိုင်ငံရေးပါတီများကင်းမဲ့ကျင်းပခြင်းဟာထရပ်ကားယာဉ်အသွားအလာ TAV လေဆိပ်သက်သာရာမည်, သူကပြောသည်။ ကဲ့သို့ပင်နိုင်ငံရေးပါတီများကင်းမဲ့, "ဒီပရောဂျက်ကိုဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ကျောင်းသားဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့သောစီမံကိန်းအတွက်နှစ်ဦးစလုံးငွေရေးကြေးရေး, မျှော်လင့်။ ကျောထောက်နောက်ခံမဟုတ်ခံရဖို့ရှိသည်နှင့်အတူနှစ်ဦးစလုံးဝိညာဏသဘောအရကိုကူညီလိမ့်မယ်။ မြင်သာထင်သာဘဏ်များဖြစ်လိမ့်မည်ဘယ်ဟာကျနော်တို့သူတွေကိုဝိညာဉ်ရေးရာဖြစ်လတံ့သောသူများဖြစ်ကြ၏။ သို့အတွက်ကြောင့်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်စီမံကိန်းပြီးစီးစေရန်ထက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြားထွက်ပေါက်နောက်ထပ်အကူအညီပေးခဲ့ တာဝန်မကျပါဘူး။ အဆွေတို့အဘို့စီမံကိန်းဧရိယာကပြောအရာအားလုံးထက်ကျကြပါဘူး '' ပိုကောင်း get '' ။ " သူကပြောပါတယ်။ Akfen ...
အစ္စတန်ဘူလ် Eurasia ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းယာဉ်အသွားအလာစိတ်သက်သာရာရလိမ့်မည် 20 / 04 / 2014 ဥရောပအာရှဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအစ္စတန်ဘူလ်ယာဉ်အသွားအလာ, သူတို့ကအစ္စတန်ဘူလ်အတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးအခြေခံအဆောက်အအုံမှပူးတွဲအရေးပါမှုကိုညွှန်ပြခြင်း, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Lutfi Elvan ၏စိတ်သက်သာရာရလိမ့်မည် "ကျနော်တို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ 80 ဘီလီယံကိုပေါင်စတင်ခဲ့ပြီးဒီအဆုံးရန်အစ္စတန်ဘူလ်," ဟု၎င်းကပြောသည်။ ဝန်ကြီးချုပ် Recep Tayyip အာဒိုဂန်၏ပါဝင်မှုနှင့်အတူ Elven သည်အစ္စတန်ဘူလ်အသွားအလာစီမံကိန်း၏အစ္စတန်ဘူလ်ရေလက်ကြားဥမင်လိုဏ်ခေါင်းလမ်းတူးဖော်မှုကနဦးအဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုတှငျကငျြးပခဲ့ပါကသိသိသာသာလျှော့ချသွားမည်ဟုဆိုသည်။ အစ္စတန်ဘူလ်, ကမ္ဘာပေါ်မှာစံချိန်စံညွှန်းများပေါ်တွင်မြို့ကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးအခြေခံအဆောက်အဦများဖယ်ရှားပစ်ရန်ကောက်ယူလေ့လာမှုများမှညွှန်ပြကမ္ဘာ့အရေးအပါဆုံးစင်တာများတဦး Elven ဖြစ်လာတော်မူကြောင်းကိုညွှန်ပြ, အစ္စတန်ဘူလ်၌ဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့အမှတ်ချက်ချသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ 80 ဘီလီယံကိုပေါင်စတင်ပါပြီ။ ...
Adnan Menderes တံတား
Mimar Sinan တံတား
Turgut Ozal တံတား
အဆိုပါတံတားဟာအသွားအလာ Batman ပြီးဆုံးလမ်းဆုံသက်သာရာပါလိမ့်မယ်
အစ္စတန်ဘူလ် Eurasia ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းယာဉ်အသွားအလာစိတ်သက်သာရာရလိမ့်မည်
traffic Bosporus Channel ကိုစိတ်သက်သာရာရလိမ့်မည်
traffic အစ္စတန်ဘူလ် Eurasia ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း၏စိတ်သက်သာရာရလိမ့်မည်ယနေ့တွင်ဖွင့်လှစ်